Hardwicke, New Brunswick, Canada
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChelsea
Ngena kwi-Oceanside Oasis apho uya kuyonwabela ikofu yakho yasekuseni kwiveranda ejonge kuNxweme lwaseMpuma ukuphuma kwelanga phezu kwamanzi. Ukutya kwaselwandle okutsha okuvela kwimarike yeentlanzi yasekuhlaleni ngokubanjiswa ngamaxesha athile onyaka. I-Cranberry marsh kwindawo yokuvuna ekwindla. Phumla kwibhafu yebhamu enkulu ngelixa uphunga iwayini ejonge elwandle ngemini yemvula. Hlala emlilweni umamele isandi esifihlakeleyo samanzi, ukhuselwe kwimozulu enkulu yi-fox island. Hamba ecaleni kolwandle lwaseSandy xa umoya uphantsi.
Ukufikelela kwindlu epheleleyo kubandakanya igaraji yemoto enye, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlamba impahla, igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela elihle labucala elibandakanya ibhafu. Igumbi lokulala lesibini linegumbi elongezelelweyo ngaphandle kwayo elineebhedi ezingamawele ezilungele usapho. Iveranda emacaleni omabini endlu ukulandela ilanga/umthunzi. I-BBQ kunye nomgodi womlilo.
I-TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Fire TV, I-Netflix
Ukomisa iimpahla ngomatshini yi-Isimahla – Kwisakhiwo
Bonisa zonke 57 izinto onokuzisebenzisa
IBaie Saint Anne yilali encinci ezolileyo. Kukho iindawo zokutyela ezi-2, igrosari encinci/ivenkile yotywala kwisikhululo serhasi, eyona venkile ilungileyo kanye ekupheleni kwendlela yaseSandy Point! Imarike yeentlanzi emangalisayo ebekwe kwindawo yokungena. Isikhephe sixakeke kakhulu ngabalobi ngamaxesha ahlukeneyo okuloba ngoko ke ayifikeleleki eluntwini, kodwa uyapaka kwaye uye kwimarike yeentlanzi nangoku.
Umbuki zindwendwe ngu- Chelsea
Ihlala ifumaneka ngefowuni, umbhalo, okanye umyalezo womoya we-bnb ukuxhasa ukude
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 16:00 - 02:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hardwicke